Самостоятельно вырастить картофель или купить: что дешевле в Сыктывкаре — Картофельная Система
в क्षेत्रीय समाचार, अर्थशास्त्र र एनालिटिक्स
सबै पक्षबाट, कोमीको राजधानी ग्रीष्मकालीन कुटीरहरूले घेरेको थियो, र अधिकांश नागरिकहरूले आफ्नो उद्देश्यको लागि जग्गा प्रयोग गर्छन् - तिनीहरूले त्यहाँ तरकारी र आलु उत्पादन गर्दछन्। बीएनकेका सम्पादकहरूले के सस्तो छ भनेर हिसाब गर्ने निर्णय गरे - स्टोरमा आलु किन्नुहोस् वा देशमा बढ्नुहोस्।
गर्मीका बासिन्दाहरूको मुख्य तर्कहरू मध्ये - तिनीहरूको आफ्नै आलु स्वादको छ। यसका साथ कोही पनि तर्क गर्दैनन् - खरीद गरिएको जहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा खराब हुन्छ। अर्को तर्क - तपाईंको कामलाई ध्यान दिएन, यो शंकास्पद सत्य प्रायः पुरानो पुस्ताका प्रतिनिधिहरूबाट सुन्न सकिन्छ। र मालीहरूले लगभग बाच्न सक्दैनन् बालीले उनीहरूलाई वास्तवमै कति खर्च गर्दछन्। हामीले उनीहरूको लागि यो गर्ने निर्णय गर्यौं। तुरून्त रिजर्भेसन गर्नुहोस् कि सबै गणनाहरू धेरै मनमानी हुन्छन्। तर प्रत्येक ग्रीष्मकालीन निवासीहरू, उदाहरणका लागि, हाम्रो योजना अनुसरण गरेर, एक किलोग्राम आलुको औसत लागत गणना गर्न सक्छन्।
गणनाको लागि, हामीले दुई सय भागको एक प्लट लियौं।
आलु मेको लेटमा रोप्दछन् - जुनको सुरूमा, पिकि - - मध्य सेप्टेम्बर सम्म। त्यो हो, तपाईंले कम्तिमा कम्तिमा months महिनासम्म साइट तयार पार्नुपर्दछ, आलु रोप्नुहोस्, झारपात, स्पड, तातो गर्मीमा, सायद दुई चार चोटि पानी, कोलोराडो बीटल संकलन गर्नुहोस्, फूलगुच्छ काट्नुहोस् (केही ग्रीष्मकालीन बासिन्दाहरूले यो उत्पादन बढाउँछन् भन्ने सोच्दछन्)। । मानौं यो सबै दस यात्राहरुमा गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईं बसबाट यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले तिर्नु पर्छ 480 गर्न 600 रूबल (मार्ग, टिकट मूल्य र छुटमा निर्भर गर्दै)। यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि बीउ आलुहरू केहि साइटमा डेलिभर गर्नुपर्नेछ - या त आफन्तहरू वा परिचितहरूलाई सोध्नुहोस्, वा कार भाडामा लिनुहोस्। हामी यसलाई राख्नेछौं 200 रूबलजबकि रकम उल्लेखनीय रूपमा बढी हुन सक्छ।
कार अधिक खर्च हुनेछ। दूरीमा निर्भर गर्दै, लागतहरू लगभग हुनेछन् 1000 रूबलयदि कुटीज शहर नजिक छ, र 4000 रूबल र उच्च यदि तपाईंले टाढा यात्रा गर्नु छ भने, उदाहरणका लागि, अर्बिटबाट मिर्टि-यू सम्म।
आलुका लागि मल
सयौंवाँका लागि तपाईंलाई करीव १००-२०० किलोग्राम सडेको मल वा कचरा चाहिन्छ (केहीले 100०० थप्ने सल्लाह दिन्छ)। अवश्य पनि, यो मल किलोग्राममा बिक्री हुँदैन - तपाईले ट्रकको अर्डर गर्नु पर्छ। सबै एक महत्वपूर्ण रकम खर्च हुनेछ, लागत पुग्न सक्छ 4000 रूबल र अधिक। यो स्पष्ट छ कि सबै खाद्यान्न, पीट वा फोहोर आलुको मुनि हुँदैन, त्यसकारण, मानौं कि पृथ्वी यसै देखि गाडिनेछ। १००० देखि १1000०० रूबल।
यसका लागि हामीले विभिन्न मलहरू, वृद्धि उत्तेजकहरू, रोगहरू र कीराका लागि उपचारहरू थप्न आवश्यक छ - 500 रूबल.
अवश्य पनि, त्यहाँ व्यक्तिहरू भेट्टाउने अवसरहरू हुन्छन् जुन भोडका बोतलहरूको एक जोडीको लागि खेतमा हातहतियार जोर्न तयार छन् (लागत लगभग हुनेछ। 300 रूबल)। प्रोफेशनल मास्टरहरू (र त्यहाँ यस क्षेत्रका केहि छन्) धेरै बढि माग्छन् - मूल्य जान सक्छ 1000 रूबल प्रति सय वर्ग मीटर (र दुईको लागि २००० रूबल)। घोषणा साइटहरू मिनी-ट्रयाक्टर, पैदल-पछाडि ट्र्याक्टर वा कृषकको साथ जमीन जोत्ने बारेमा सन्देशहरूले भरिएका छन्। मूल्य लगभग समान छ - hundred००-2000०० रूबल प्रति सय वर्ग मिटर, त्यो हो 1400-1600 रुबल दुई सय भाग को लागी।
प्रायः ग्रीष्मकालीन बासिन्दाहरूले आफैंमा सबै काम गर्छन्, विश्वास गर्छन् कि तिनीहरूको कामको पैसामा कुनै पनि अनुवाद हुँदैन। हामी तिनीहरूको लागि यो गर्नेछौं। यहाँ कति समय खर्च गर्नुपर्दछ:
- जोताई - hours घण्टा;
- अवतरण - hours घण्टा;
- झार - hours घण्टा;
- हिलि; - hours घण्टा;
- कटाई - hours घण्टा
कुल।। घण्टा बाहिर आयो। तर यहाँ तपाईं थप hours घण्टा थप्न सक्नुहुन्छ पानी पिउनका लागि, बगहरू स collecting्कलन गर्न, थप निदाउन। थप रूपमा, सबैजना छिटो काम गर्दैनन्, त्यसैले हामी 34 बजेमा सबै प्रकारका कामका लागि त्रुटिलाई ध्यान दिनेछौं। हामी पैसाको लागि श्रम घण्टा गणना गर्दछौं। कोमिनाटको पछिल्लो तथ्या .्क अनुसार अर्थतन्त्रमा सिक्टिभकरमा औसत तलब प्रति महिना thousand२ हजार रूबल छ। एक महिनामा - १ work० कार्य घण्टा। त्यो हो, सहरको औसत लागत प्रति घण्टा 8२8 रूबल हो। हामी खर्च गरेको समय गुणा गर्छौं र हामी पाउँदछौं कि आलुहरूको हेरचाह गर्मीको बासिन्दाहरूलाई लाग्छ 11050 गर्न 16250 रूबल.
मालीहरु आलु नवीकरण सल्लाह हरेक वर्ष। विविधतामा निर्भर गर्दै, एक किलोग्राम रोपण सामग्रीको लागत to ० देखि १ 90० रूबलसम्म हुन्छ। यदि तपाईं तीन किलोग्राम लिनुहुन्छ भने, त्यसपछि लागतहरुबाट हुनेछ 270 गर्न 480 रूबल.
जोताई, हिलि and र फसल काट्नु कडा परिश्रम हो, र सबैजनाले यसलाई सजीलै सहन सक्दैनन्। तसर्थ, स्वास्थ्य पुनर्स्थापनाको लागि वार्मिंग मलम, पेन्किलरहरू र अन्य औषधीहरूको लागतहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ। मानौं तपाईं यसलाई खर्च गर्नु पर्छ 200 गर्न 500 रूबल.
धेरै जसो सम्भवतः फावडे, र्याक्स, हेलिकप्टर र खुट्टाहरू पहिले नै उपलब्ध छन्। तर तपाईलाई आवश्यक पर्दछ, उदाहरणका लागि पन्जा। यो सबै राख्नुहोस् 100 रूबल.
कोमीलाई जोखिमपूर्ण कृषिको क्षेत्रमा खटाइएको छ: सुक्खा र तातो गर्मी वर्षा र चिसो द्वारा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, कहिलेकाहीं फ्रुस्ट जुलाई जुलाईमा पनि देखा पर्दछ। यसैले यस क्षेत्रमा आलु उत्पादन प्रति हेक्टर १ to० देखि cent० प्रतिशतसम्म हुन सक्छ। कोमिनाटको दीर्घकालीन डाटाका आधारमा गणतन्त्रमा औसत आलु उत्पादन प्रति हेक्टर १२० प्रतिशत हुन्छ, अर्थात १०० एकरमा १२,००० किलोग्राम, अर्थात् २ एकडमा २ 180० किलोग्राम।
यदि तपाईं न्यूनतम लिनुहुन्छ (बस चढ्नुहोस्, मल किन्नुहोस्, आफैं सबै गर्नुहोस् र कुनै चीजमा पैसा खर्च नगर्नुहोस्), तब लागत १२..12,5 हजार रूबल हुनेछ। यसैले, यसको एक किलोग्राम स्वादिष्ट आलु एक गर्मी निवासीमा खर्च हुनेछ 52 रूबल। यदि तपाईं कार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तब आलुको "लागत" प्रति किलोग्राम २-१-2 रूबलले बढ्छ।
यदि तपाईं बचत गर्नुहुन्न (कार ड्राइभ गर्नुहोस्, बीउ आलु, खाद, मल, उपकरणहरू, औषधिहरू खरीद गर्नुहोस्), तब लागत २१..21,8 हजार रूबल हुनेछ, र एक किलोग्राम आलुको मूल्य लगभग छ Ru १ रूबल.
अब सिक्टिभकर स्टोरहरूमा एक किलोग्राम सस्तो आलु किन्न सकिन्छ 26 रूबल। विदेशी (अजरबैजानबाट) लागत 72 रूबल। औसत मूल्य to 36 देखि ru 45 रूबलसम्म हो। शरद Inतुमा, जब तरकारीको अत्यधिक मात्रा हुन्छ, तपाईं पसलहरूमा आलुहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ 20 रूबल प्रति किलोग्राम।
टैग: बढेको आलु को लागतसिकिस्कर
कोलोम्नाबाट बीउ आलुको ब्याचलाई कीराको लागि जाँच गरियो
कृषि मन्त्रालयले २०२० मा कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक गतिशीलता अपेक्षा गर्दछ
मिचुरियन ब्रीडरहरूले भाइरस रहित आलु बनाउँदछन्
आलू प्रणाली पत्रिकाको नयाँ अंक!
खाबरोव्स्क क्षेत्रमा, नगरपालिका उत्तरी डेलिभरीलाई सब्सिडी दिन बाध्य छन्।